'' တိုင်းရင်းသားတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်?? - Yangon Media Group
” တိုင်းရင်းသားတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်??
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရလက်ထက်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်နဲ့ ပြင်ဆင်ရမယ့် အပိုင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီချုပ်ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာမျိုး ညွန့်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားမှုများကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
မေး – အခုကြားဖြတ်ရွေးကောက် ပွဲက ဒီချုပ်ပါတီရဲ့ မျှော်မှန်းထားတာ ထက် ပိုပြီးအရှုံးပြနေသလားဗျ။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့မျှော်လင့်ထားသလောက် ရာ ခိုင်နှုန်းမရပါဘူး။
မေး – အခု ဒီချုပ်ရှုံးသွားတဲ့နေ ရာ ခြောက်နေရာမှာ နိုင်မယ်လို့ တွက်ထားတဲ့နေရာတွေ ဘယ် နေရာတွေပါလဲ။ ဘာလို့ရှုံးတယ် လို့ ယူဆလဲ။
ဖြေ – အဓိကကတော့ တိုင်းရင်း သားနယ်မြေတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ ရှုံးတာပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေက ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ လုပ် ဆောင်မှုတွေကိုအားမရလို့ ထောက်ခံမှုကျဆင်းတယ်လို့ ကျွန် တော်တို့ကတော့ ယေဘုယျ ကောက်ချက်ချပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ကလည်း ဝန်ထမ်း ရပ်ကွက်လည်းဖြစ်တယ်။ အဲဒီ နယ်မြေမှာ လက်လှမ်းမီသလောက် ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြိုင် ဘက်ပါတီကလည်း အဲဒီနေရာမှာ ပါတီရုံးရှိတယ်။ အခမဲ့ဆေးခန်း လည်း ဖွင့်ထားတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့ထက်တော့ တစ်ပန်း သာသွားတယ်။
မေး – အခုကြားဖြတ်ကနေ ဒီချုပ်ပါတီအနေနဲ့ ဘယ်လိုသင် ခန်းစာကြီးကြီးကို ရခဲ့လဲ။
ဖြေ – ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဆောင်ချက် တွေကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့၊ ကျွန် တော်တို့ရဲ့ အခြားအားသာချက် တွေ ဒါတွေကို ဆန်းစစ်ဖို့အ တွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့ လိုက်ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားရမှာပါ။ အခုတစ်ထိုင်တည်းနဲ့ ပြန်ဖြေလို့ မရပါဘူး။
မေး – ၂ဝ၁၅အထွေထွေရွေး ကောက်ပွဲနဲ့ နောက်ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲနှစ်ခုရဲ့ ရလဒ်တွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသား ဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍပိုပြီးမြင့်တက် လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒီချုပ် အနေနဲ့ ၂ဝ၂ဝ မှာလည်း ပြည် နယ်တွေမှာအရှုံးပြဖို့ များတယ် လို့ မယူဆဘူးလား။
ဖြေ – အဲဒီလိုတော့ မဟုတ်ပါ ဘူး။ အခုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်။ နဂိုကတည်းက အားနည်းတဲ့နေ ရာတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ လဲချား ပေါ့။ အဲဒီလိုတော့ ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာဆိုရင် ကျွန်တော် တို့မဲ ငါးရာခိုင်နှုန်းပဲ ရတာပါ။
မေး – ကချင်ပြည်နယ်၊ အမျိုး သားလွှတ်တော်နေရာမှာဆိုရင် ဒီချုပ်ပါတီနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီ နှစ်ခုမှာ မဲပျံ့သွားပြီးတော့ ကြံ့ ခိုင်ရေးက နိုင်သွားတဲ့သဘောကို သွားတွေ့ရတယ်ခင်ဗျ။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုမျိုး မဲပျံ့မှုမျိုးဟာ ၂ဝ၂ဝ မှာ ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်မလာ နိုင်ဘူးလား။
ဖြေ – အဲဒါကတော့ ကျွန်တော် တို့အကုန်လုံး ပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီး တော့မှ သုံးသပ်ရမယ့်ကိစ္စပါ ခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ လမ်း ကြောင်းမှာ အင်မတန်အရေးကြီး တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်။ ဒီမဲ နေရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ညှိ နှိုင်းပြီးတော့ ခွဲဝေလိုက်ရုံနဲ့ ကျွန် တော်တို့ ရှေ့ကိုသွားမယ့် နိုင်ငံ ရေးမူဝါလမ်းကြောင်းမှာ ခိုင်မြဲမှု မရှိမှာ ကြောက်ရတာရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရတဲ့ အပိုင်း တွေမှာ တစ်သွေးတစ်သံ တစ်မိန့် ဖြစ်တဲ့၊ အင်မတန်ခိုင်မာတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းရှိပါတယ်။ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်း ပုံပြင်ဆင်ဖို့၊ အဲဒီနေရာမှာ ကျွန် တော်တို့က အသားကျပြီးသား နိုင်ငံများလို ကျွန်တော်တို့ အကွဲ ကွဲအပြားပြားနဲ့ ငြင်းခုံနေမယ်ဆို ရင် ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက် မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲတော့ ဒီလို ကြားကာလမှာ အင်အားကောင်း တဲ့၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ ပါတီကြီးကပဲ ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင် ခွင့်ကိုယူပြီးလုပ်တာကပဲ ကောင်း မယ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ သုံး သပ်ပါတယ်။
မေး – ဆိုတော့ NLD အနေနဲ့ ၂ဝ၂ဝ မှာလည်း တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်ပါတီတွေနဲ့ သူနိုင်-ကိုယ်နိုင်ဖြစ်စေမယ့် မဟာဗျူ ဟာမျိုး ချမှတ်ဖို့မရှိသေးဘူးဆို တဲ့ သဘောပေါ့။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်ကိုကြည့်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ အ ခြေအနေက နိုင်ငံတကာဖိအား တွေအောက်မှာ ရင်ဆိုင်နေရပါ တယ်။ ဒါပမယ့် ရခိုင်အမျိုးသား ရေးကိုအခြေခံတဲ့ပါတီတွေက အမျိုးသားရေးကိုသာ ဦးစားပေး ပါတယ်။ အဲဒီအခြေအနေမျိုးမှာ နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကို ရင်ဆိုင် ရလို့ရှိရင် မဲဆန္ဒနယ်တွေခွဲခြင်း အားဖြင့် ပိုမိုခက်ခဲလာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။
မေး – ဆရာတို့အနေနဲ့ ဆွေးနွေး မှုတွေမပြုလုပ်ခင် သံသယတွေကို အရင်ရှေ့တန်းတင်သလိုဖြစ်မနေ နိုင်ဘူးလား။
ဖြေ – အဲဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ပြောလို့ရမယ်။ ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ် အသေးစိတ်ညှိနှိုင်း ပြီးတော့မှ မူဝါဒအားဖြင့် သေချာ ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှ ဒီဟာကဖြစ်လာ မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့မူဝါဒတွေ မရှိဘဲနဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ လုပ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန် တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦး အေးသာအောင်တို့လိုနေရာတွေ မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဝင်မပြိုင် တဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။
မေး – ဒီချုပ်အစိုးရလက်ထက်ပေါ့ ကြားဖြတ်နှစ်ခုမှာ မဲလာပေးသူ ဦးရေဟာ ကျဆင်းလာတာကိုတွေ့ ရတယ်။ မဲလာမပေးသူတွေထဲမှာ ကြားဖြတ်က အရေးမကြီးဘူးဆို ပြီး လာမပေးသူရှိမယ်။ ဒီချုပ်ကို စိတ်ပျက်လို့ လာမပေးတာလည်း ရှိတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ အဲဒီလို မျိုး စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ အပေါ်ရော ဆရာ့အနေနဲ့ဘာပြော လိုလဲ။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိအ ခြေအနေမှာ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင် နိုင်သလောက်ကို လုပ်ဆောင်နေ ပါပြီ။ ပြည်သူအပေါ်မှာ ဘယ် တော့မှ ကျွန်တော်တို့သစ္စာဖောက် မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူပိုင်မြေပေါ် မှာ ကျွန်တော်တို့ပါတီက အလွဲသုံး စားလုပ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ကြိုးစားနေတာ ကို ပြည်သူတွေ လက်ခံလာပါလိမ့် မယ်။
မေး – ၂၅ရာခိုင်နှုန်းအကျောပေး ထားရတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအောက် မှာပေါ့နော်၊ ၂ဝ၁၈ ကြားဖြတ်ရလဒ် ဟာ ၂ဝ၂ဝ အတွက် ဒီချုပ်အ တွက် ဘုရားတရမယ့် အခြေအနေ မျိုးလား။
ဖြေ- နဂိုကတည်းက ၂၅ ရာခိုင် နှုန်းရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့က အဓိကပြိုင်ဘက်ပါတီက အမတ် ၁ နေရာရရင် ကျွန် တော်တို့က ၃ နေရာရအောင် ကြိုးစားရပါတယ်။ ၃ နေရာရမှ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာ။ အဲဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာ လက်ရှိ အခြေအနေအရ ကျွန်တော်တို့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ညှိနှိုင်း ပြီးတော့ ပြောင်းလဲသင့်တာတွေကို လည်း ပြောင်းလဲရမှာပေါ့။
မေး – လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း ဆိုရင် စိုးရိမ်စရာရှိတယ်လို့ပြောချင် တာလား။
မေး – ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာရှိ ရင် ပြောပေးပါဦး။
ဖြေ – ကျွန်တော်တို့က ဒီမိုကရေ စီကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘယ်တော့ မှ ပြည်သူကိုလိမ်ညာပြီးတော့ ဥပ ဒေမဲ့လုပ်ရပ်နဲ့ အာဏာရအောင် ကြိုးစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူ ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို အမြဲလက်ခံထား ပါတယ်။